Nakaton’i India Ny Internet Archive Sy Ny Tranonkala Mpizara Tahiry Maherin’ny 2.600 Mba Hiarovana Ny Bollywood · Global Voices teny Malagasy
Nitatitra ireo Indiana fa tsy tafiditra tao amin'ny Internet Archive
Voadika ny 13 Aogositra 2017 5:53 GMT
Lohamilina Fitehirizana Amin'ny Aterineto. Sary avy amin'i John Blyberg tao amin'ny Flickr. CC BY 2.0
Hatramin'ny 8 Aogositra 2017, maro ireo Indiana nitatitra fa tsy afaka niditra tao amin'ny Internet Archive izy ireo. Naharay ity hafatra ity ireo mpiserasera raha niezaka niditra tao amin'ny tranokala:
Ny URL angatahanao dia voasakana araka ny torolalana voaray avy amin'ny Departemantan'ny Fifandraisan-davitra, governemantan'i India. Azafady mifandraisa amin'ny mpitantana raha mila fanazavana bebe kokoa.
Tsy nisy ny antony nambaran'ireo mpamatsy tolotra aterineto eo an-toerana na ny manampahefana mikasika ny fandrarana
Tamin'ny 10 Aogositra 2017, na izany aza, nitatitra ny BuzzFeed fa vokatry ny didim-pitsarana roa navoakan'ny Fitsarana Ambony ao Madras ao amin'ny fanjakana Indiana Tamil Nadu no nahatonga ny fanakanana (azo jerena ato sy ato). Nifototra tamin'ny fitakiana nataon'ireo trano mpamokatra horonantsarimihetsika malaza roa Bollywood, Red Chillies Entertainment sy ny Prakash Jha Productions ny didim-pitsarana, nivoaka tamin'ny 2 Aogositra2017, mba hampiato ireo tranonkala mpizara tahiry tsy hizara kopia piraty amin'ireo horonantsarimihetsika Bollywood, “Jab Harry Met Sejal”, sy “Lipstick Under My Burkha” nivoaka vao haingana.
Ny Internet Archive dia fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola ao San Francisco ary mpiaro ny aterineto maimaim-poana. Efa nandrakitra tao amin'ny habaka nandritra ny 20 taona mahery izy ary nitahiry “pejy habaka miliara avy amin'ireo tranonkala an-tapitrsany” miaraka amin'ny fanampian'ireo raboto izay mitety tranonkala tsy tapaka.
Ny fanakatonana ny @internetarchive dia tahaka ny manakatona tranom-boky. Mila miady amin'izany isika.
Notaterin'ny tranonkalam-baovao teknolojia Indiana MediaNama voalohany ny fandraràna. Araka ny voalazan'ny MediaNama, niresaka tamin'ny governemanta Indiana momba ny sakana ny Internet Archive saingy tsy nahazo valiny. Nilaza ihany koa ny tatitra fa notapahana ny http://web.archive.org, fa tsy ny https://web.archive.org.
Ankoatra ny Internet Archive, tranonkala fifampizarana tahiry maherin'ny 2.600 ihany koa no voakasiky ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Nanohy ny ady amin'ny piraty ny indostrian'ny sarimihetsika Bollywood, indrindra fa ny fandefasana horonantsarimihetsika tsy ara-dalàna amin'ny aterineto.
Ny tena meloka dia ny @LipstickMovie@RedChilliesEnt sy ny Madras HC izay nanome baiko ny fanakanana ireo tranonkala 2650
Izany tokoa ve? *Izany* no antony nahatonga ny fandraràna ny @internetarchive??
Araka ny filazan'ny tranonkala Internet Live Stats, manana mpisera aterineto maherin'ny 462,1 tapirisa amin'ireo mponina ankapobeny miisa 1,3 miliara i India tamin'ny tapaky ny taona 2016. Manoloana ireo tarehimarika ireo, maro dia maro ny fandraràna ankapobeny tamin'ireo tranonkala tahaka ny Internet Archive.